Axmed Safiina “Doorashada Aqalka Sare ee Jubbaland wey xayirnaaneysaa haddii aan labo kursi loo xirin haweenka” – Kalfadhi
Afhayeenka guddiyada doorashooyinka Soomaaliya Axmed Aadan Dagaal Safiina, ayaa sheegay in ay xayirnaan doonto doorashada afarta kursi ee Aqalka Sare ee Jubbaland, haddii aan haweenka loo xirin labo kursi oo ku dhiman Jubbaland.
Dowlad-gobolleedka Jubbaland oo ahaa maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay doorashada ayaa todobaadkan doonaya in uu soo gaba-gabeeyo doorashada Aqalka Sare, waxaana ku dhiman afar kursi oo laba kamid ah ay waajib tahay in loo xiro dumarka, si loo xaqiijiyo qoonadada haweenka ee boqolkiiba 30-ka ah.
Doorashada kuraasta ku dhiman Jubbaland lama aqbalayo, lamana qabanayo, haddii aan haweenka loo xirin labada kursi ee ku dhiman Jubbaland, sidaasi waxaa yiri Axmed Safiina.
Doorashada ka hor madaxweynayaasha maamuladda ayaa guddiga doorashada usoo gudbiya magacyada musharraxiinta kuraasta, Axmed ayaa caddeeyay in ay maamulka ku celiyaan haddii aysan caddeyn kuraasta loo xiray haweenka.
Haweenka ayaa boqolkiiba 25 ka ah Senetarrada ilaa iyo hadda la doortay, waxaana ay gaari doonaan boqolkiiba 27 haddii labada kursi ee Jubbaland ku hartay la doorto.
Qoonadaha haweenka ee 30% ma ahan sharci ku qoran dastuurka balse waa dalab ka yimid haweenka oo markii dambe laga dhigay heshiis siyaasadeed, si dumarka looga qeyb-geliyo siyaasadda.